﻿ ​बुधबारदेखि विराटनगरबाट पनि श्रम स्वीकृति पाइने
​बुधबारदेखि विराटनगरबाट पनि श्रम स्वीकृति पाइने
काठमाडौं । बुधबारदेखि सरकारले प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरबाट श्रम स्वीकृति दिने भएको छ । विराटगरबाट सुरु भएसँगै सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृतिलगायतका सबै काम हुनेछन् ।
विराटनगरबाट सेवा दिनका लागि सबै तयारी पूरा भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले पुस १५ गते प्रदेशबाट सेवा दिन सुरु गरेको थियो ।
प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीका सेवा सुरु भएसँगै कामदारले पाउँदै आएको सास्ती हटेको छ । प्रदेशबाटै सेवा सुरु भएसँगै वैदेशिक रोजगार विभाग र उपत्यकाभित्रै रहेका वैदेशिक रोजगार कार्यालय, वैदेशिक रोजगार मलेसिया, कतार र साउदी शाखा कार्यालयमा सेवाग्राहीको संख्या कम हुँदै आएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार दैनिक एक हजार पाँच सयभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । उनीहरूलाई केही समय अघिसम्म वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत ताहाचल कार्यालयले मात्रै श्रम स्वीकृति दिने गरेको थियो । प्रदेश कार्यालयबाटै श्रम स्वीकृति दिनुका साथै पीडितको उजुरी लिने र अनुसन्धान गरी पीडकलाई कारबाही गर्नेछन् ।
श्रम विभागअन्तर्गत हरेक प्रदेश राजधानीमा रहेका श्रम कार्यालयमार्फत वैदेशिक रोजगार एकाइबाट वैदेशिक रोजगारीका सबै सेवा पाउने छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीका अनुसार प्रदेशबाट डिमान्ट लेटर, पूर्वस्वीकृति, श्रम स्वीकृति, उजुरी लिने र उजुरी फछ्र्योटलगायत काम गर्नेछन् ।
प्रदेश कार्यालयमा अधिकृतको नेतृत्वमा कम्प्युटर अपरेटर, सुब्बा, सहायकलगायत गरी कम्तीमा ६ जनासम्म कर्मचारी छन् ।
सोमबार २१, माघ २०७५ &#2406;&#2411;:&#2407;&#2408;
मङ्गलबार २२, माघ २०७५ &#2407;&#2407;:&#2409;&#2408;
Dherai Ramro, dherai khushi lagyo. Sram mantri lai rhiday dekhi dherai - dherai dhanybad
मङ्गलबार २२, माघ २०७५ &#2406;&#2412;:&#2409;&#2409;
बिराट्नगर मा सरम कुन ठाउ मा रैछ?